Talooyin Ku Habboon Sida Ugu Fiican Ee Aad Uga Faa’iidayn Karto Maalmahaaga Fasaxa | Salaan Media
July 5, 2019 | Published by: admin
Aalaaba ayaamaha fasaxu waxa ay dhammaadaan innaga oo aan uga faa’iidaysan sidii ugu habboonayd, ama iyada oo u aragna maalmo macna daran, oo xiise u qabna in aynu shaqadii dhaqso dib ugu noqonno.
Haddaba siyaaba ugu fiican ee uu qofku uga faa’iidaysan karo maalmihiisa fasaxu waxa ay u baahan tahay qorshayn fiican iyo in uu marka hore si deggen uga sii fikiro. Waxaa ugu muhiimsan in uu naftiisa dareensiiyo firaaqo iyo in aanay jirin hawl gaar ah oo ay ku mashquushaa, waah ab uu qofku ku soo ceshan karo caafimaad qabkiisa nafsiga ah, maskaxdunka ku heli karto firaaqo ay ka fikirto hal-abuur kale iyo hindiseyaal ay hore waqti u la’ayd ka fikirkooda. Sida oo kale waa fursad ady ku xallin karto dhibaatooyin haystay oo ay go’aan ka gaadhistooda waqti ku filan maskaxdu u la’ayd.
Qormadan waxa aynu ku soo qaadanaynaa soo jeedimo uu wargeyska New York Times sheegay in ay caawinayaan in qofku uu sida ugu habboon u qaato fasaxiisa
Dhammaanteen xilliga shaqada waa aynu daalnaa, oo nafta ku qasabnaa hawlo ay ogtahay in ay tacab badan kala kulmayso. Sidaa awgeed marka aynu fasax helno waa in aynaan nafta ka hor istaagin in ay sidaas hore lidkeeda noqoto.
Maalmaha shaqada ee badan iyo daalka joogtada ahi waxa uu maskaxda ku abuuraa dareen ah in ay mashquul joogto ah ku jirto, xitaa marka aanay shaqo haynin. Arrintan oo joogto noqotaana waxa ay nafta ku yeelataa raadad caafimaad darro, oo ay ka mid tahay daalka oo mar keliya ka degi waaya, qulub, warwar iyo xanuunnada nafsiga ah eek u xidhan daalka maskaxda.
Uur ku taallada, nacaybka iyo xiqdigu waxa ay caafimaadka qofka ku reebaan saamayn caafimaad oo taban. Cilmibaadhis ay samaysay jaamacadda Stanford ee dalka Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qofka oo naftiisa ku tababara cafiska ay kor u qaaddo awoodda uu u leeyahay in uu cadhadiisa xakameeyo, taasina waxa ay yaraysaa daalka iyo calaamadaha caafimaad darro ee jidhka. Arrimahaas oo isu tagayna waxa ay dhaawacaan caafimaadka habdhisyada difaaca, wadnaha iyo xididdada dhiigga.
La cuntee qoyska
Waa laga yaabaa in ay adkaato in qoyska oo dhami uu miis ku wada cuno cuntada, shaqada, waxbarahsada, jimicsiga, iyo waajibaadka kale ayaa dhammaantood caqabad ku ah in qoysku mar meel ku wada cunteeyo. Laakliin cilmibaadhisuhu waxa ay ina barayaan in qoyska miis keliya ku wada cunteeyaa ay ka farxad badan yihiin, nafsad ahaanna ka caafimaad badan yihiin kuwa aan meel isugu iman. Fursadaha fasaxa shannadka uga faa’iidayso in aad qoyska meel isugu keento xilliga cuntada.
Shaqooyinkii kugu daahay iska dhammee
Shaqada badan ee aynu qabanaynaa waxa ay qasabtaa in aynu shaqooyinka qaarkood dib isaga dhigno, si aynu ula sugno waqti aynu haleeli karno. Marka laga tago dib u dhaca hawshaas ku imanaya, waxaa jira dhibaato kale oo ka dhalata hawlaha aynu dib u riixayno, waxaa ugu weyn in ay culays nafsadeed oo joogto ah maskaxdeenna ku hayaa. Culayskaasi ugu dambaynta waxa uu innagu noqdaa xaalado qulub iyo walbahaar ah oo aan kala joogsi lahayn.
Maalmaha fasaxa uga faa’iidayso in aad hawlihii kugu baaqday oo dhan u samayso jadwal kooban oo aad iska dhammayso, si aanay fasaxa kaddib kugu sii haynin culayskii soo taxnaa. Waxa ay khubarada cilminafsigu caddaynayaa in qofka oo hawlaha ku taagan iska dhammeeyaa ay geliso farxad iyo raynrayn nafsadeed.
Dib u cusboonaysii tamartaada
Waxaa waajib ah in aynu nafta siinno fursad ay dareento in aanay jirin wax hawl ah oo u taallaa. Tusaale ahaan waa in aynu u ogolaanno in ay iska hor fadhiisato talefishanka. In ay saacado intii hore ka badan seexato.